ဆာလာကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းကြီး နှစ်သင်းနဲ့အတူ အခြားသော မနက်ခင်းသတင်းတိုများ …. – Myan Ball
ဆာလာကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းကြီး နှစ်သင်းနဲ့အတူ အခြားသော မနက်ခင်းသတင်းတိုများ ….
၁။ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်မှာပဲ ကစားသမားဘဝကို အဆုံးသတ်မယ့် မိုဒရစ်
ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမား မိုဒရစ်ဟာ လက်ရှိ အသင်းမှာပဲ ကစားသမားဘဝကို အဆုံးသတ်လိုတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက် (၃၄) နှစ်အရွယ် အဆိုပါ ကွင်းလယ်လူကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် အင်တာမီလန် အသင်းက စိတ်ဝင်စားနေပေမယ့် ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကတော့ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းကို စွန့်ခွာဖို့ ဆန္ဒမရှိပါဘူး။
၂။ ဆန်ချိုနေရာ အစားထိုးဖို့ ဆော်ပေါ်လို ကြယ်ပွင့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဒေ့ါမွန်
ဒေါ့မွန် အသင်းဟာ အသင်းက ထွက်ခွာဖို့ နီးစပ်နေတဲ့ ဆန်ချိုရဲ့ နေရာမှာ အစားထိုးဖို့အတွက် ဆော်ပေါ်လို ကြယ်ပွင့် အန်တိုနီကို စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ် အဆိုပါ ကစားသမားလေးကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ဒေါ့မွန် အသင်းက ကင်းထောက်တွေ စေလွှတ်စောင့်ကြည့်နေပါပြီ။
၃။ ဖီအိုရင်တီးနား ကြယ်ပွင့်ကို ခေါ်ယူပေးဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့ ကွန်တီ
အင်တာမီလန် နည်းပြ ကွန်တီဟာ ဖီအိုရင်တီးနား အသင်းရဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား ချီယေဆာကို ခေါ်ယူဖို့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။ အသက် (၂၂) နှစ်အရွယ် အဆိုပါ ကစားသမားအတွက် ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းက ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း (၅၀) သတ်မှတ်ထားတာပါ။
၄။ ဆာလာကို စောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဥရောပထိပ်တန်းအသင်းကြီး နှစ်သင်း
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ PSG အသင်းတို့ဟာ လီဗာပူးအသင်းရဲ့ ကစားသမား ဆာလာကို ခေါ်ယူဖို့ စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါ အီဂျစ် ကစားသမားအတွက် လီဗာပူးအသင်းက ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း (၂၀၀) ဝန်းကျင် ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုသာ လက်ခံ စဉ်းစားပေးသွားမှာပါ။
၅။ ဝီလီယံကို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ မျက်စိကျနေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်
ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းဟာ ချဲလ်ဆီးအသင်းရဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား ဝီလီယံကို ခေါ်ယူဖို့ မျက်စိကျနေပါတယ်။ အဆိုပါ ကစားသမားဟာ လက်ရှိ အချိန်အထိ ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းမတိုးရသေးဘဲ လာမယ့် နွေရာသီမှာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှာပါ။
၆။ ဂျူဗင်တပ်စ် နောက်ခံလူကို အဓိက ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ အေစီမီလန်
အေစီမီလန် အသင်းဟာ ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူ ဒီမီရယ်လ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။ အသက် (၂၁) နှစ်အရွယ် အဆိုပါ ကစားသမားဟာ အသင်းမှာ ပုံမှန် ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့ ရုန်းကန်နေရပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကတော့ သူတို့ ကစားသမားအတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို (၃၆) သန်း တောင်းဆိုဖွယ်ရှိပါတယ်။
၇။ အလာဘာကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်
ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းရဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ အလာဘာကို ခေါ်ယူဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ် အသင်း အနေနဲ့ အဆိုပါ သြစတြီးယား နောက်ခံလူကို လာမယ့် ဆောင်းရာသီမှာတင် ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေပြီး ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း (၅၀) နဲ့ ကမ်းလှမ်းသွားမှာပါ။
၈။ ရေးဗားပလိတ်ကြယ်ပွင့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ မန်စီးတီး
မန်စီးတီးအသင်းဟာ ရေးဗားပလိတ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ နီကိုးလပ်စ်ဒီလာခရုဇ်ကို စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ အဆိုပါ ကစားသမားအတွက် မန်စီးတီးအသင်းက ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို (၂၅) သန်းနဲ့ ကမ်းလှမ်းဖို့အတွက်လည်း ပြင်ဆင်နေပါပြီ။
ပွဲထွက်စာရင်းမှာ အရည်အချင်းမပြည့်လို့ ရာသီအစပိုင်း ရလဒ်ဆိုးနေတာပါဆိုတဲ့ ဒီဂီယာ